I-china excavator sieve abenzi bamabhakethi kunye nabathengisi | UMCINI
Ukumelana Good banxibe, ubomi inkonzo ende, isakhiwo elula kunye nolondolozo lula. Isetyenziswa ngokubanzi kwizinyithi, izinto zokwakha, ishishini lamachiza, iinkozo, amayeza, isichumisi samachiza kunye namanye amashishini ahlolwe izixhobo.
Iimveliso zithunyelwa kuMzantsi-mpuma weAsia, uMzantsi Asia, uMbindi Mpuma, Mpuma Asia, uMzantsi Melika kunye neminye imimandla, kwaye umgangatho wemveliso ulungile. Ubonelelo lwenkampani lunokuhlengahlengiswa ngexesha kunye neemfuno zeodolo.Iimveliso zethu zinokufakwa kuzo zonke izinto zokumba, siyakwamkela abathengi nceda usithumelele imizobo okanye iimodeli zokumba. Singumzi mveliso onamava eminyaka ekusetyenzisweni kwemveliso, kubandakanya amabhakethi e-excavator iindawo ze-OEM ziyafumaneka.Isiqinisekiso:Unyaka o-1 iwaranti yomatshini
Amandla okubonelelaAmandla okubonelela:50 Piece / Pieces Inyanga nganyeUkupakisha kunye nokuhanjiswaIinkcukacha PackagingIinkcukacha Packaging I-pallet esemgangathweni yamanye amazwe okanye ityala leenkuni. 1. enye ye-20GP ingalayisha malunga neziqwengana eziyi-12-14.2. enye ye-40HC ingalayisha malunga nama-26-28 amaqhekeza e-1.0m3 okanye i-1.2m3 yeebhakethi ze-20ton excavator;3. i-20GP enye inokulayisha malunga neziqwenga ezi-8 1.6m3 iibhakethi ze-30ton excavator; 4. enye ye-40HC ingalayisha malunga neziqwenga ezili-16 1.6m3 iibhakethi ze-30ton excavator.
Izibukoishanghai / Lianyungang / QingdaoIxesha lokukhokhela :
Ubungakanani (Amacandelo) 1 - 1 2 - 10 11 - 50 > 50
Est. Ixesha (iintsuku) 8 30 55 Kuya kuthethathethwana
Q1. Leliphi elona xabiso lakho lihle?A: Singumzi mveliso ngokuthe ngqo uya kukubonelela ngexabiso elifanelekileyo lokhuphiswano.Umbuzo Ndinganxibelelana njani nawe? Ngaba ndimele ndikuthembe?A: Unokukhetha isiqinisekiso soRhwebo njengendlela yakho yokuhlawula enokukhusela izibonelelo zakho, singamalungu evenkile yeenkwenkwezi ezintathu zeAlibaba.Umbuzo. Yintoni ixesha lokuhlawula?A: Umanyano lwaseNtshona, T / T, isiqinisekiso sezorhwebo samkelekile.Q4: Uya kuba nini umhla wokuhambisa kwakho?A: Ngesiqhelo kwiintsuku ezingama-25-30 emva kokufumana intlawulo yakho, kwaye siya kuzama konke okusemandleni ethu ukugcwalisa iimfuno zakho. Sijolise kwinkolelo yolawulo "loMgangatho kuqala, igama elibalulekileyo, uMthengi osekwe".
Egqithileyo Excavator rock emele
Okulandelayo: isixhobo sokumba